Madaxweynaha Puntland ‘Saciid Deni’ oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Puntland ‘Saciid Deni’ oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo...
Madaxweynaha Puntland ‘Saciid Deni’ oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo +(SAWIRRO)
Baydhabo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wafdiga Madaxweynaha Puntland oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay masuuliyiin uu ugu sareeyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen).
Madaxweyne Deni iyo Wafdigiisa ayaa soo dhaweyn kadib waxaa loo galbiyay Xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed, halkaaoo ay xilligan ku sugan yihiin.
Labada Madaxweyne ayaa shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Madaxtooyada. Madaxweynaha Koonur Galbeed oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin imaanshaha wafdiga Madaxweynaha Puntland.
Madaxweyne Laftagareen ayaa tilmaamay in labada bulsho uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah oo iskaashi, walaaltinimo iyo Soomaalinimaba ku qotama.
Mr. Laftagareen ayaa intaa ku daray in socdaalkan uu la xiriiro, sidii loo xoojin lahaa xiriirkaasi.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida quruxda badan ee loogu soo dhaweeyay Xarunta Ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Inta uu ku sugan Magaalada Baydhabo Madaxweynaha Puntland ayuu sheegay inuu kulamo kula qaadan doono Madaxda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Ugu dambeyn, Saciid Deni ayaa tan iyo 1dii bishan ku sugnaa Magaalada Muqdisho, iyadoo uu kaga qaybgalay shirkii ay ku lahaayen Madaxda DF Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Saciid Deni oo gaaray Baydhabo
soo dhaweyn diiran
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ‘Laftagareen’ oo gaaray Degmada Xudur +(SAWIRRO)
Rag diyaarinayay qaraxyo oo la qabtay & faah-faahino ka soo baxaya
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay guri xoog looga heystay